सम्झना मार्च २९ को : कसरी पुगे तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोमा ? « Janata Samachar
सम्झना मार्च २९ को : कसरी पुगे तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोमा ?
काठमाडौ । आज मार्च २९ । सन् १९५३ मा आजकै दिन विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो मानव पाइला टेकेको दिन । आजको दिनलाई नेपाल र विश्वमा पर्वतारोहणको क्षेत्रले विशेष उत्सवका रुपमा स्मरण गर्ने गर्दछन् । सन् १९५३ को मार्च २९ का दिन नेपालका तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा (जसले पछि भारतीय नागरिकता लिए) र न्यूजील्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले पहिलोपटक सागरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए ।
कसरी पुगे तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोमा ?
तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको जन्म नेपालको एउटा दुर्गम र विकट गाउँ त्सा–चुमा एउटा अति साधारण परिवारमा भएको थियो । तर तेन्जिङको नाम आज मानव इतिहासकै पाटोमा अब असाधारण र अविस्मरणीय नाम बनिसकेको छ । संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामाथि पहिलोपटक पाइला टेक्ने मान्छेको रुपमा उनी विश्व इतिहासमै अमर पात्रका रुपमा स्थापित हुन पुगेका हुन् । यसरी, प्रकृतिमाथि मानव विजयको इतिहासको श्रृंखलामा तेन्जिङको नाम नमेटिने गरी लेखिनुको पछाडिको कथा कम रोचक, रोमाञ्चक र साहसिक छैन !
सगरमाथाको काखैमा जन्मेका तेन्जिङको बाल्यकालदेखिकै सपना सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने थियो । र, आफ्नो यो सपनालाई पूरा गर्न आफ्नो जीवनको करिब २० वर्ष लामो ऊर्जामय समय तेन्जिङले सगरमाथामा मान्छे पुग्ने प्रयासको प्रायः सबै अभियानहरुमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी हुँदै बिताएका थिए । यस क्रममा उनले त्यस्ता अभियानहरुमा एउटा सामान्य भरियाको रुपमा देखि लिएर सरदार एवं अभियान दलकै सम्मानित सदस्यका रुपमा समेत सहभागी भएका थिए । सगरमाथामाथि विजय गर्ने प्रयासमा लागेका सन् १९३५, १९३६, १९३८ र १९५३ का व्रिटिश आरोहण दलका साथ मात्र हैन, सन् १९४७ मा अर्ल डेनम्यानका साथ पनि उनले सगरमाथा चढ्ने प्रयास गरेका थिए । तेन्जिङमा सगरमाथा चढ्ने कस्तो अनौठो धुन थियो भने, उनले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण उर्जामय समयहरु सगरमाथा चढ्ने प्रयासमै समर्पण गरेका थिए ।
एक पटक उनले भनेको थिए, “मेरो भित्री मनदेखिकै इच्छा नै सगरमाथाको शिखरमा जाने थियो ‘ सगरमाथाको आकर्षण मेरो लागि संसारको अन्य कुनै पनि शक्तिको आकर्षणभन्दा धेरै गुना बढी शक्तिशाली थियो ।”
वास्तवमै, सगरमाथामाथि विजय हासिल गर्ने मानव प्रयासहरुमा तेन्जिङको सहभागिता उनका समकालीन अन्य शेर्पाहरुको जस्तो जीवनयापनको दृष्टिले मात्रै हैन, जसरी भए पनि सगरमाथा आरोहण गरी छाड्ने इच्छा, धून र समर्पणको नतिजा थियो । त्यसैले, तेन्जिङको यो धून, यो समर्पण र यो उत्साहलाई विश्लेषण गर्नेहरु अझै पनि भन्ने गर्छन्, “वास्तवमै तेन्जिङ सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो व्यक्तिका हकदार नै थिए ।”
हुन पनि, सन् १९५३ सम्ममा सगरमाथा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने मानिस सम्भवतः उनी नै थिए । एडमण्ड हिलारीसँग मिलेर सगरमाथा आरोहण गर्नुभन्दा एक महिना पहिले मात्रै उनले स्वीस आरोहण दलमा सहभागी भएर रेमण्ड ल्यामबर्टका साथ सगरमाथाभन्दा करीब १ हजार फीट तलसम्म पुगेका थिए । सम्भवतः त्यसबेलासम्म संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा मान्छे पुगेको क्षण नै त्यही थियो ।